प्रधानसेनापति « रिपोर्टर्स नेपाल
सेनापति थापा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोर, जर्नेल कर्णेलमाथि समेत कारबाही
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भएलगत्तै २०७५ साल असोजमा पूर्णचन्द्र थापाले पत्रकार भेटघाट राखेर बोलेका थिए । उनले दुई रथीलाई दायाँबायाँ राखेर सेनाभित्र
भावी प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले लगाए रथीको फुली
काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाली सेनाको रथीमा पदोन्नति भएका प्रभुराम शर्माले आज फुली थापेका छन् । उनलाई प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रथी दर्जाको दज्यान्ही चिन्ह लगाइदिएका हुन् । रथीको फुली लगाएपछि
पूर्णचन्द्र थापापछि प्रभुराम शर्मा सेनापति बन्ने टुंगो लाग्यो
काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपाली सेनामा भावी सेनापतिको टुंगो लागेको छ । १७ महिनाअघि नै भावी प्रधानसेनापतिको टुंगो लागेको हो । उपरथी प्रभुराम शर्मालाई रथीमा बढुवासँगै उनको प्रधानसेनापति हुने बाटो
प्रधानसेनापति र मेक्सिकोका राजदुत बीच भेटवाता
काठमाडौ,फागुन २४ । प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापासँग मित्रराष्ट्र मेक्सिकोका नवनियुक्त गैह्र आवासीय महामहिम राजदुत फेड्रिको साल्स ला्त्फे को जङ्गी अड्डामा शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताको क्रममा प्रधानसेनापति महारथी थापा
प्रधानसेनापति थापाले बढुवा अड्काएर आफन्तलाई यसरी बनाए रथी
काठमाडौं, १५ माघ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सामु रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत निरिह भएका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानसेनापति थापाले आफ्ना साँढुभाई शरद गिरीलाई रथी बनाउनकै लागी रिक्त रथी पदको
यी हुन् भारतका हुनेवाला सेनापति
भारतीय सेनामा नयाँ प्रधानसेनापति को हुने निश्चित भएको छ । भारतीय सेनाका उपसेनापति रथी मनोज मुकुन्द नरभाने नयाँ सेनापति बन्ने भएका छन् । हालका सेनापति विपित रावत ३१ डिसेम्बरमा सेवानिवृत्त
काठमाडौं, ११ मंसिर । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार रुसी समकक्षी सेरगेइ लेभरोभलाई भेटे । त्यही दिन नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सि नोभिकोभ सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेटे ।
भावी प्रधानसेनापति को ? पक्का भयो
काठमाडौं १० असोज । सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी प्रभुराम शर्माको पदावधि एक वर्ष दुई महिना १५ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। उनको म्याद थपसँगै नेपाली सेनाको भावी सेनापति रोलक्रम
प्रधानसेनापतिको अर्को राम्रो काम ! सकलदर्जाको भत्ता वृद्धि
काठमाडौं १ असोज । नेपाली सेनाको सुधारमा लागेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सकल दर्जाका लागि अर्को राम्रो काममको घोषणा गरेका छन्। नेपाली सेनाका शान्ति सेनामा सहभागी हुने सकलदर्जाले मिशनमा खट्टिएको अवधिमा
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सम्बोधनमा के छ ? (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं, २५ भदौ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएको एक वर्षको पुगेको अवसरमा भदौ २४ गते मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्बोधन गरेका थिए । उक्त अवसरमा उनले आफ्नो
काठमाडौं २५ भदौ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई थप व्यवसायिक र जवाफदेही बनाउन आवश्यक परे अझ् कठोर कदम चाल्ने बताएका छन्। सेनापतिको जिम्मेवारी समालेको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा
प्रधानसेनापति र बङ्गलादेशका मन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, २० भदौ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका राज्यमन्त्री डा एमडी इनामोर रहमानलगायतको ११ जनाको उच्च अधिकारीहरुको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ । जङ्गी अड्डामा आज भएको भेटवार्तामा प्रधानसेनापति थापा